သမ္မတ သဝဏ်လွှာတွင် ပါရှိခဲ့သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက် စာတမ်းရုပ်သိမ်းခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း တကမ္ဘာလုံးသိနေပြီ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
သမ္မတ သဝဏ်လွှာတွင် ပါရှိခဲ့သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက် စာတမ်းရုပ်သိမ်းခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း တကမ္ဘာလုံးသိနေပြီ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့တွင်တင်ပြရန်ပေးပို့ခဲ့သည့် သ၀ဏ်လွှာကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် သ၀ဏ်လွှာကို အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသ၀ဏ်လွှာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကထံသို့ ၁၇-၈-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၁၀၇(၁)/၈/ သမ္မတရုံးဖြင့်ပေးပို့ထားသော သ၀ဏ် လွှာအား ဤစာဖြင့် ပယ်ဖျက်ပေးပါရန် သ၀ဏ်လွှာပေးပို့အပ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတကပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပကဖြစ်စဉ် သုံးသပ်ချက်မှတ် တမ်းပါ ပူးတွဲပါရှိခဲ့သောကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့ရာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ကပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေး တွင်သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်တင်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က ရွှေ့ဆိုင်း ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့သည်။
အဆိုပါ သဝဏ်လွှာတွင် ပါရှိခဲ့သည့် ရခိုင်တိုင်းသားများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်
http://www.scribd.com/doc/103777506/News-Summary-About-Rakhine-Conflict-by-President-Officeပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ပြည်သူတို့၏ အခြေအနေနှင့် သုံသပ်ချက် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ပါရှိသော
(က) နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ သံဃာအချို့နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့ခေါင်းဆောင်၍ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုစိတ်ဓါတ်ကို အလွန်အကျွံမြှင့်တင်ခြင်း၊ လူမျိုးရေးအရ အဆင်ခြင်မဲ့စွာ တိုက်ခိုက်လိုစိတ် ကို လှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံအတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ ရခိုင်အသိုက်အ၀န်းများသို့ပါ ချဉ်းကပ်စည်းရုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
(ခ) နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီမူစလင်များအပေါ် အကြမ်းဖက်ရန်ကိုလည်း အစဉ်မပြတ် ကြံစည်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများအနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်ခြင်းမပြု၊ ကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိပဲ သယံဇာတများကိုသာ ထုတ်ယူသုံး စွဲခဲ့ သည်ဟူသော တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲစေသည့် လှုံ့ဆော်မှုမျိုးတွေ့ရသည်။
(ဃ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘင်္ဂါလီများခိုးဝင်မှုကို ထိရောက်စွာတားဆီးခြင်းမရှိ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် အဂတိလိုက်စားသောဝန်ထမ်းများအား အရေးယူခြင်းမရှိ ကြောင်း အစိုးရအပေါ်စွပ်စွဲမှုအချို့ရှိသည်။
(င) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် မဲအနိုင်ရရှိရေးကိုမျှော်ကိုးလျက် ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ဘင်္ဂါလီမူစလင်များအပေါ် မသင့်မလျော်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း စွပ်စွဲလျက်ရှိသည်။
(စ) ၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအရ ဘင်္ဂါလီမူစလင်များ နိုင်ငံသားဖြစ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေကိုလည်း နားလည် လက်ခံနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
(ဆ) ဘင်္ဂါလီများကိုသာ တစ်ဘက်သက်ကူညီနေသည်ဟု ရှုမြင်ချက်ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် အငြိုးထားကာ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဒေသတွင်မနေရဲအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာသည်။
(ဇ) ရခိုင်တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ရပ်ဆိုင်းနေသည့် ဘင်္ဂါလီများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အချောင်ရယူရန်ကြိုးပမ်းလာကြောင်း တွေ့ရသည်။
(ဈ) ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘင်္ဂါလီများအားလုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားကြရလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။
This entry was posted on March 3, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဗြောင်ငြင်းတဲ့ အကျင့် ၊ ဌေးလွင်ဦး	Infront of Thein Sein Rohingya Demonistration in Norway →